Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Dhoofinta Shidaalka Ogadenya oo La Joojiyay, Ogow Sabab.
Faallo: Dhoofinta Shidaalka Ogadenya oo La Joojiyay, Ogow Sabab.
Posted by ONA Admin	/ December 1, 2018
Sida ay baahisay warbaahinta gudaha ee Itoobiya, waxaa la joojiyay gabi ahaanba dhoofinta shidaalka Soomaalida Ogadenya (Soomaali Galbeed) ay hodanka ku tahay ee ilaahay ku manaystay.
War-murtiyeed saxaafada loo qaybiyay oo ay soo diyaarisay Wasaarada Khayraadka Dabiiciga & Tabarta ee Itoobiya ayaa lagu sheegay in hakad uu ku yimid soo saarista iyo dhoofinta shidaalka. Arintan ayay wasaaradu u sababaysay in shirkadii dhoofin lahayd shidaalka aysan haysanin sharcigii ogolaanshaha.
Waxaa kale oo war-murtiyeedka lagu sheegay in uu jiro dadaal badan oo loogu jiro sidii shirkada dhoofinta shidaalka Soomaali Galbeed loogu dhamaystiri lahaa sharciga ogolaanshaha kadibna ay dib u bilaabi doonto hawlaha shidaalka.
Dhinaca kale laguma xusin war-murtiyeedkan ay wasaaradu baahisay magaca iyo mulkiilaha dhabta ah ama jihada laga leeyahay shirka dhoofinta shidaalka Ogadenya. Arintan oo shacabka Soomaali Galbeed aad uga cadhaysiisay sababtoo ah shacabka oo aad uga biyo diidsan qaabka khayraadkiisa loo maaraynayo iyadoon wax talo iyo saamayn ah uu shacabku ku lahayn.
Tan iyo intii mudo ah waxaa la iswaydiinayaan oo aan wali wax jawaab ah loo haynin sababta shirkad aan sharcigii dhoofinta shidaalka haysanin loo siinayo suuq gaynta shidaalka? Maamulka Soomaali Galbeed ee fadhigiisu yahay Jigjiga xog intee le’eg yuu ka ogyahay arimaha ku saabsan shidaalka? Miyaysan xaq u lahayn shirkadaha, ganacsatada, shaqaalaha, aqoonyahanka iyo maamulka Soomaaliyeed inay iyagu maareeyaan arimaha shidaalka?
Jawaabaha su’aalahan iyo kuwo kale oo badan waxaan uga tagaynaa akhristeyaasha ONA haduu ilaahay yiraahdo.